တရုတ်သတင်းစာတွေ အင်္ဂလိပ်စာလုံးညှပ်မသုံးရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တရုတ်သတင်းစာတွေ အင်္ဂလိပ်စာလုံးညှပ်မသုံးရ
Posted by ywetnu on Dec 22, 2010 in News |4comments
တရုတ်နိုင်ငံမှာ သတင်းစာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ အင်္ဂလိပ်စာညှပ်မသုံးရဘူးဆိုတဲ့ အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။
တရုတ်စာတွေထဲမှာ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေ၊ စာလုံးအတိုကောက်တွေထည့်သုံးတာက အဓိပ္ပာယ်ရှုပ်ထွေးစေတဲ့အပြင် ဘာသာစကားကိုလည်း ပျက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဖတ်ဖို့ မူရင်းသတင်းထည့်ပေလိုက်ပါတယ်
BEIJING – Chinese newspapers, books and websites will no longer be allowed to use English words and phrases, the country’s publishing body has announced, saying the “purity” of the Chinese language is in peril.
View all posts by ywetnu →
တရုတ်ကြီးတော့ ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်နဲ့ နာချင်ပြီနဲ့တူတယ်။
လူဦးရေများလို့သာအသုံးများနေတာပါ မြန်မာစာလေါက်တောင်အဆင့်မရှိပါ ….
ကိုတရုတ်တို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ရှိလှချေလား။
ကြားဖူးတာတော့ တရုတ်တို့ အင်ဒိုနီးရှားတို့က မြန်မာတွေလောက်တောင် အင်္ဂလိပ်စာ အသုံပြုနိုင်တဲ့ဦးရေ မများဘူးတဲ့ … ။ ဒါကြောင့်ထင်ပါတယ် ။